Chungui: Famongarana Ny Zava-dozan’ny Fampihorohoroana Tany Però · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Jona 2014 12:36 GMT
Vakio amin'ny teny English, Português, Nederlands, Español
Telopolo taona lasa izay, olom-pirenena an-jatony no niharan'ny [es] herisetran'ny vondrona mpampihorohoro Shining Path (Sentier Lumineux) sy ireo hetsika fanoheran'ireo herin'ny governemanta Peroviana ny fikomian'ireo vondrom-piarahamonina tao Chungui sy tany Oreja de Perro (Sofin'Alika) [es], any amin'ny faritr'i Ayacucho. Maro tamin'ireo maty ireo no nalevina tanaty lavaka iombonam-be tsy fantatra, ary vao haingana no nanomboka ny famongarana sy ny famantarana ny taolam-balon'izy ireo.
Ny Komitin'ny Fahamarinana sy Fampiraisana, izay natsangana mba hanadihady ny herisetra ara-politika nanjaka tao amin'ny firenena nandritra ireo taona 1980 sy 1990, dia namoaka ireo fijoroana vavolombelona [es] voaangona tany Chungui sy Oreja de Perro ireo tanatin'ny tatitra farany nataony, miaraka amin'ny vanim-potoana nitrangan'ireo toe-javatra ireo tamin'ny 1967-1995. Taorian'ny namakiana ity tantara ity, mazava fa tsy fanafihana iray na roa ihany no nihatra tamin'ilay faritra, fa fanafihana mitam-piadiana maro sy hetsika fandrahonana nataon'i Shining Path nandritra ny taona 1980, tao anatin'izany ny famonoana mpikambana marobe tao anatin'ilay vondrom-piarahamonina sy ny famonoana ho faty ireo tompon'andraikitra ara-piarahamonina. Novinavinaina ho 1384 ireo niharan'ny fampihorohoroana tao amin'ny faritr'i Chungui fotsiny.
Ny volana Janoary 2013, nomena ireo fianakaviany [es] ireo taolambalo sisa tavela an'ireo 78 niharan'ny herisetra tao amin”ny faritr'i Chungui ka nofongarana[es], ary mbola fanombohany fotsiny izany. Io taona io ihany, ny volana Aogositra, nanambara ny fisianà taolambalo miisa 200 hita tao amin'ny lavaka iombonam-be tao amin'ny faritr'i Oreja de Perro ny Ekipa Ara-tsiansa Voatokana Hisahana ny Heloka Bevava (EFE) – singa iray ao amin'ny Biraon'ny Mpampanoa lalàm-bahoaka, ary koa ny fanombohan'ny asa famerenana izany any amin'ireo fianakaviany. Nilaza [es] i Ivan Rivasplata, filohan'ilay ekipa ara-tsiansa, fa mbola sarotra ny hilazàna raha niharan'ny herisetran'ny Shining Path ireo olona ireo na an'ny Miaramila.
Ny fandaharam-potoana nizoran'ny famongarana [es], izay navoakan'ny gazety tao an-toerana, dia fitanisana vaovao mankarary fo an'ireo taona maro sy ny antony, eny fa na dia efa ela aza izany, mbola mahasarika ireo mpisaona haka ny taolambalo sisan'ny fianakaviany nisy namono, sady nanampy izy ireo tamin'ny fanomezana ireo fanazavana rehetra ilaina mba hahitana fasana iombonam-be hafa sy toerana fandevenana tsy ara-dalàna. “Ity tanàna ity [Amaybamba] dia miandry an'i Valentín Casa Quispe, tanora 36 taona mpiandry ampondra izay mitondra miaraka amin'ny biby fiompiny 10 ireo entana sy fitaovana ho an'ny famongarana. Liana manokana amin'ny fanampiana ny ekipan'ny mpampanoa lalàna izy, satria mihevitra izy fa anatin'ny iray amin'ireo lavaka be nandevenana ireo no hahitany ny taolambalon-dreniny nisy namono, maty ny taona 1986 raha mbola vao zazalahikely 9 taona izy.”
Maro ireo zaza no lasa kamboty tsy fidiny sady tsy maintsy nikarataka [es] mba hamelomany irery ny tenany amin'ny fomba rehetra. “7 taona monja i Eugenia raha voavono ho faty tao amin'ny tanànan'i Chaupimayo ireo rahavaviny, ary ny rainy tao amin'ny toby miaramilan'i Mollebamba, ny taona 1984. Taorian'io loza io, namakivaky roa taona tany an-tendrombohitra tamin'ny fihinana bozaka nomasamasahana sy katsaka manta ilay zazavavikely. [.. .] “Efa 9 taona aho raha nisambotra sy nitondra ahy tany Mollebamba ny tafika”. Nomen'ny tafika an'i Lorenza Hurtado, vehivavy tantsaha iray izy, izay nanery azy hiandry ireo biby fiompiny miraoka ahitra sy hanompo azy”. Nampijaly ahy ilay ramatoa, nivazavaza ahy sady nilaza foana tamin'ny olona eo amin'ny fiarahamonina fa nampiantrano mpampihorohoro kely izy». Herintaona taty aoriana, nanavotra azy ny dadatoany, Antonio Quispe Nieve, ka nitondra azy nankany Andahuaylas.”
Teo amin'ny bilaogy GranComboClub, nampitaha sy nanatsoaka hevitra [es] ilay manam-pahaizana mikasika ny toekarena, Silvio Rendón, taorian'ny fandinihany ilay tantara feno herisetra tany Chungui sy Oreja de Perro:
Sehatry ny ady nampifanandrina ireo mpanohitra sy ireo toherina ny faritr'i Chungui nandritra ny taona valopolo sy sivifolo ary ankehitriny dia anisan'ny “VRAE”, lohasahan'ireo reniranon'i Apurimac sy Ene, faritry ny coca (rongony) izay mbola ahitana hetsika mitam-piadiana manohitra ny fitondrana Peroviana. Marik'olana mbola mahazo vahana eo amin'ny tantaran'ny Peroviana ny zava-nitranga 45 taona lasa izay. Ary tahaka ny hitanay tamin'ny 1965: fanoheran'i Gran Pajonal [es], tsy nisy “komitin'ny fahamarinana”, tsy nisy fitsarana miaramila, tsy nisy fanamelohana, sy ny tahaka izany. Nijanona ho tahaka ny hatrizay ny zava-drehetra.
Ny lahatsoratra loharano dia navoaka tao amin'ny bilaogy Globalizado [es], an'i Juan Arellano